Xmotion concept ကို ၂၀၁၈ North American International Auto Show မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Nissan! – AutoMyanmar
Xmotion concept ကို ၂၀၁၈ North American International Auto Show မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Nissan!
Nissan အနေနဲ့ Xmotion concept ကို လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ North American International Auto Show မှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Xmotion ဟာအရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ SUV ဖြစ်ပြီး ခရီးသည် အနည်းဆုံး ၄ ယောက်ကနေ အများဆုံး ၆ ယောက်အထိစီးနှင်းနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်အစားကကြီးသလို ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်း လက်ရာမြောက်ပြီး ရိုးရှင်းလှပါတယ်။
ကားရဲ့အရောင်ကငွေရောင်ဖြစ်နေပြီး ပြင်ပဒီဇိုင်းက U-Shape ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ကားဘီးတွေက ၂၁ လက်မရှိနေပြီး aluminum-alloy နဲ့ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အနောက်မီး Graphic ဒီဇိုင်းကို ဂျပန်တွေရဲ့ရိုးရာဖြစ်တဲ့ Kumiki Wood Puzzle ကိုအခြေခံပြီးပြုလုပ်ထားတာပါ။ Xmotion ရဲ့ ပြင်ပဒီဇိုင်းထက် အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုကြည့်ရင် ဂျပန်တွေရဲ့ ရိုးရာကိုပိုမိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကားရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာဆိုရင် အနီရင့်၊ အဖြူ၊ အမည်း အစရှိတဲ့အရောင် ၃ ရောင်ပါဝင်ပါတယ်။ မူရင်းဖော်ပြထားတဲ့ Scarlet ကို အနီရင့်လို့ ပြောပါရစေ။ အနီရင့်ဟာတော့ နေမင်းကြီးရဲ့ အားရင်ကြီးမားပုံကိုကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဖြုရောင်ကတော့ ရိုးရှင်းမှုနဲ့ သန့်ရှင်းမှု ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီး အမည်းရောင်ကတော့ အများမတူကွဲပြားပြီး စွမ်းအင်ပြည့်နေတာကိုကိုယ်စားပြုတာပါ။ အရောင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဂျပန်ရိုးရာနဲ့တွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Haruto Noguchi ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တော့ Xmotion concept ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းတော်တော်များများဟာ ဂျပန်ရိုးရာကနေဆင်းသက်လာပိုပြီး သိနိုင်မှာပါ။ အောက်ပါ Xmotion ရဲ့ video ကိုကြည့်ပြီးရင်ပိုပြီး မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“We envision the Xmotion concept to beahighly functional SUV that can be driven every day, yet can take the owners and friends toanational park or recreation area onawhim,” Alfonso Albaisa said. “With its combination of style and technology, this concept fulfills Nissan’s mission of moving people toabetter world.”
Xmotion concept အတွက် Alfonso Albaisa ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကတော့ အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Alfonso Albaisa ဟာတော့ Nissan Motor ရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းက စီနီယာ president တစ်ဉီးပါ။
Xmotion concept ဟာအရွယ်အစားကြီးမားပြီး ရိုးရှင်းဒီဇိုင်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာကြောင့် အသက်အရွယ်မရွေးကြိုက်ကြမယ့် SUV ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်တဲ့အဆင့်က ပြီးပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရောင်းချမယ့်အဆင့်ကို စောင့်ဆိုင်းရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Nissan unveiled the #XmotionConcept at the 2018 #NAIAS and we know you will want to get your hands on it: and https://t.co/ayZ2jjgiSZ
— Cronic Nissan (@CronicNissan) January 20, 2018